Middlesbrough v Newport: kubatanidza mamaneja maviri kubva kudunhu rakaoma | 1xbet
Nemusha waakakurira nababamunini vake sekuru Ted nagogo-mainini Sheila kukanda ibwe uye Newport yakakurumbira Transporter Bridge ichidongorera pamusoro pemitsara yedzimba kuseri kwechinangwa, Flynn ari muchinhu chake sezvaanokomberedza bhora mukona yepamusoro. Sezvo murume wemakore makumi matatu nemasere anotendeuka kuenda kunopemberera, mumwe chigunwe achinongedzera mudenga, zvakaoma kufungidzira kugwinha kumeso kwake kuve kwakafararira kana Newport ichitevera kukunda kwavo pamusoro peLeicester munharaunda yakapfuura nekukonzeresa kumwe kutsamwa paMiddlesbrough . “Olé,” anosheedzera. FA Cup yechina kutenderera: 10 zvinhu zvekutarisira kunze kwevhiki ino Verenga zvimwe
Flynn ari kutora rwendo rwekudzika ndangariro nzira nechikonzero chakanaka.Pillgwenlly, kana Piritsi sekuzivikanwa kwaro mukona ino yekumaodzanyemba kweWales, haisi iyo chete kwaakakurira asiwo nharaunda yakaoma yemukati meguta kwakakurira Tony Pulis, maneja weMiddlesbrough, zvichireva kuti Mugovera wechina-kutenderera tayi. inopfuura musangano pakati pevaimbova vatambi veNewport. MuPiritsi, ine huwandu hwevanhu vangori pasi pezviuru zvisere, ndiFlynn anorwisa Pulis. Kana kuti, neimwe nzira, Baldwin Street yakanangana neDolphin Street. “Ndakafunga kuti zvaive zvakanaka kumativi ese, zviri pachena kuti chii nekubatana.” Isu tese takatamba Piritsi – Tony akatambira Piritsi YMCA, ini ndakaridza Piritsi AFC, pamwe naMichael.Saka zvakangonaka munharaunda. ”
Vese vatatu vakabudira Newport pamatanho akasiyana uye, saka nyaya yacho inoenda, Raymond aive mutambi ane tarenda kupfuura Tony. Raymond, uyo anoshanda seforogo-simudza mutyairi wemotokari yekambani yekupakata muNewport doko, anotaridzika kushomeka maitiro ekupindura kana zano iri raiswa kwaari uye achida kumbokurudzirwa. “Enderera, zviwedzere,” anodaro Flynn, achinyemwerera. Facebook Twitter Pinterest Raymond Pulis, aimbove mutambi weNewport, padoko kwaanoshanda ikoko. Mufananidzo: Gareth Phillips weGuardian
“Ini ndaive mutambi ari nani,” anodaro Raymond. “Asi Tony aive akazvipira zvakanyanya. Uye izvo zvekuti akatama kubva pamba zvakamubatsira, nepo ini ndakagara muPiritsi saka ini ndaive ndichiri neshamwari dzangu dzese.Tony akasiya angangoita makore gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu, akagara mumatumba muBristol, aiuya kumba Mugovera wega wega mushure memutambo [weBristol Rovers] uye haana kumbocheuka.
“Zvakanaka kwaari, akagadzirwa kurarama kwakanaka kubva mairi uye zvine hungwaru zvaakawana – makore 40-45 ave achibatanidzwa munhabvu yehunyanzvi. Imba iri paDolphin Street, kusiri kure nechitima njanji yaitakura marasha kubva kumipata ichienda kumasimbi nesimbi, uye isingasviki hafu mamaira kubva kunhandare uko Flynn anga achiraramisa hujaya hwake. “Unogona kusiya gonhi rakavhurika husiku hwese ipapo,” anodaro Raymond. “Iwe waisafanira kunetseka nezve chero munhu. Ipapo ndipo paiva nePiritsi. Wese munhu aiziva munhu wese. ”
Flynn anodzungudza musoro wake.Aive nemakore mashanu Tony paakasiya Newport kuenda kuBournemouth mu1986 asi anoti zita rePulis raizivikanwa kwaari paakakura. “Tony munhu wandagara ndiine nguva yakawanda nekuremekedza, nekuda kwezvaakaita. Ini ndoziva kuoma kwazviri kubva kuNewport uye kuenderera mberi kuyedza kuzvinatsa iwe pachako. Zvakaoma. Asi kune vanhu vazhinji vakanaka zvakare. “Ndiri kunzwa rombo rakanaka kuti ndakakurira muPiritsi, nekuti ndiyo yaive nharaunda yepedyo apo munhu wese aive nemusana wese.” Facebook Twitter Pinterest Michael Flynn anoita zvemahara-kurovera padhuze nepakakurira.Mufananidzo: Gareth Phillips weGuardian
Kukwira nekudonha kwePiritsi kunonzwa kwakabatana zvine chekuita nedoko, iro raibudirira mukati mekota yekutanga yezana ramakore rechi20 asi rakadzikira mukuderera zvichitevera kurasikirwa kwakawanda kweiyo indasitiri yepakati kumaodzanyemba kweWales. Angelo, baba vaTony naRaymond, vakashanda kuWhitehead Steelworks, yaishandira vanhu zviuru zviviri pakukwirira kwayo asi yakavharwa muna 2005. ipapo akavapa.Flynn anoyeuka achitamba mumitambo ye25-a-mativi neSvondo mangwanani – “Iyo mitambo yaimbokusimbisa; vanga vasina basa nekuti waive nemakore gumi kana makumi mana ekuberekwa ”- uye anoti kunyangwe vaizopinda mukukwikwidzana sevana, hapana kana chakambove nechinotyisa. “Taimbonetsana dzimwe nguva asi taizove shamwari mushure. Pakanga pasina mapanga aibatanidzwa kana kudonha. ”
Tarenda remitambo rinowanzobudirira munzvimbo dzakatorerwa uye ndizvo chaizvo zvave zviri muPiritsi. Zvakare nekubudirira kwaFlynn, uyo akaita zvishamiso kubvira paakatanga kutonga kuNewport mu2017, naTony Pulis, uyo akakwikwidza mitambo inodarika chiuru semaneja, Piritsi ndipo zvakare David Pearce, aive shasha yeBritish heavyweight tsiva mukutanga kwema1980, kwakabva.Zhizha rapfuura chifananidzo chemurume anonzi “Newport’s Rocky” chakafumurwa padyo neRwizi Usk. Facebook Twitter Pinterest Michael Flynn naRaymond Pulis mukukurukurirana pamasuo. Mufananidzo: Gareth Phillips kune Guardian “Ndichagara ndichiti Norman Parselle,” anodaro Flynn, achireva mukuru wekusimudzira nharaunda weNewport, akahwinawo mukwikwidzi chinangwa chekutanga mushure mekuchinja.
“Ndaiwanzopedza chikoro, rova musuwo wake, nekuti aigara mhiri nenhandare yebhora, uye mukumbire kuti abude azodzidzise neni. Ini handikwanise kutaura zvakanyanya pamusoro pake asi haadi izvozvo nekuti anosarudza kuenda pasi pe radar. ”
Raymond anobvumirana. “Norman anga ari mukuru.Zvaakaitira vana vadiki vese vePiritsi zvave zvisingatendeseke. ”
Kunyangwe Tony anga asipo munzvimbo iyi kweanopfuura makore makumi matatu Raymond anoti mukoma wake haana kumbokanganwa midzi yake uye anogara achityaira motokari Dolphin Street paanodzoka. “Akaunza Stoke City pasi pano kuitira pre-mwaka ushamwari apo aive maneja wavo,” anowedzera. “Chikwata chimwe chakaenda kuAlbion Rovers [muNewport] uye chimwe chakaenda kuYMCA. Akapawo Piritsi maiti maviri akazara. ” Facebook Twitter Pinterest Tony Pulis akapanana mameseji naMichael Flynn kubvira pakagadzirwa dhizaini. Mufananidzo: Alan Walter / Action Mifananidzo
Parizvino, zvakadaro, anofara kugadzirisa kugamuchirwa kwakanaka kuRwizi rwese. . “Ndakamutumira: ‘Tokuona munguva pfupi’. Akapindura: ‘We will spoil you, Flynny, don’t you worry about that.’ ”